လင်္ကာ: ဦးသန်းလွင်ထွန်း၊Dr. Wakar Uddin
ဦးသန်းလွင်ထွန်း၊Dr. Wakar Uddin
မြန်မာပြည် အပြောင်းအလဲ နဲ့ ရိုဟင်ဂျာ အခွင့်အရေး (VOA)
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ ဆွေးနွေးခန်းမှာ မြန်မာပြည်မှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေ ပြုပြင်ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာမှုကြောင့် အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စီးပွားရေးဒဏ်ခတ်မှုများကို ဖယ်ရှား ဖို့ ပြင်ဆင်နေချိန်မှာ မြန်မာပြည်အနောက်ဖက်အခြမ်းမှာ ရှိနေတဲ့ မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာများရဲ့  လူ့အခွင့်အရေး၊ တရားဝင်နေထိုင်ခွင့်များ ရရှိရေးအရေးကိစ္စများကိုလည်း အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ ဝိုင်းဝန်းကူ ညီဖြေ ရှင်းပေးဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ အမေရိကန်အခြေစိုက် ရိုဟင်ဂျာအသင်းရဲ့  ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူ Dr. Wakar Uddinကိုဗွီအိုအေ မြန်မာသတင်းဌာနမှူး ဦးသန်းလွင်ထွန်းက တွေ့ ဆုံမေးမြန်း ဆွေးနွေးသုံး သပ်တင်ပြ ထား ပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  နိုင်ငံရေးဖြစ်ပေါ် ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကြောင့် စီးပွားရေးပိတ် ဆို့မှုတွေ ကို ရုတ်သိမ်းရေး၊ ဒါမှမဟုတ် အတိုင်းအတာလျှော့ချရေး အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက စဉ်းစားမယ် ဆို ရင် မြန်မာနိုင်ငံအနောက်ဖက်ခြမ်းက မူဆလင် ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  အရေးကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်စားသင့် တယ်လို့ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ ရှိနေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ရိုဟင်ဂျာအသင်းရဲ့  ခေါင်းဆောင် Dr. Wakar Uddinကအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကို တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန မှာ လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Daniel Bell နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ Pennsylvania ပြည်နယ် တက္ကသိုလ်၊ အဏုဇိဝဗေဒဌာန ပါမောက္ခ Dr. Wakar Uddin ကို ဗွီအိုအေ က တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ကျနော်ကို အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဌာနက Deputy Assistant Secretary of State Daniel Bell က ခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီ meeting မှာ သူက ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေရဲ့  အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက် လို့ တော်တော်များများ ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ အဓိကတော့ relaxation of sanction အတွက် စဉ်းစားနေတော့ အမေရိကန်အစိုးရက ရိုဟင်ဂျာရဲ့  ရှေ့ ရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ တော်တော်စိုးရိမ်နေတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ sanction ကို relax လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာအကြောင်း၊ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြန်မာအစိုးရနဲ့ စကားပြောဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ ကျနော် နားလည်းသလောက်ကတော့ အမေရိကန်အစိုးရအနေနဲ့ လက် ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံကို လက်ရှိထားရှိတဲ့ ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုတွေကို တဖြည်းဖြည်းလျှော့ချပေးဖို့ စဉ်းစားနေတယ်။ တကယ်လို့ ဒီအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အနောက်ဖက်ဒေသမှာရှိနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့  အခြေအနေနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ထည့်သွင်းစဉ်း စားသင့် တယ်လို့ Dr. Wakar တို့က ယူဆတဲ့အတွက် ဒီပြဿနာကို လာရောက်တင်ပြဆွေးနွေးတဲ့ သဘောပေါ့။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ရခိုင်ပြည်မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးရဲ့  အခြေအနေ က တော်တော်ဆိုး ပါတယ်။ ပြဿနာက တခုမဟုတ်ပါဘူး။ ပြဿနာက အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိကပြဿနာကတော့ တိုင်းရင်းသားကြောင့် ရိုဟင်ဂျာတွေက၊ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  တိုင်းရင်းသားအစစ်ဖြစ်ပေ မယ့် သူတို့လက်ထဲမှာ အခု တိုင်းရင်းသားလက်မှတ် မရှိပါဘူး။ တိုင်းရင်းသားမဖြစ်လို့ လက်မှတ်မရှိလို့ သူတို့သွားလာခွင့်၊ ရန်ကုန်သွားခွင့်၊ စစ်တွေသွားဖို့အတွက် သွားလာခွင့် မရှိပါဘူး။ အခုတော့ နည်းနည်းပါးပါး သွားခွင့်ပြုနေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ လက်ထပ်လို့ မရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျောင်းတွေပါတွေသွားတာပညာရေးတို့ ပတ်သက်လို့မရဘူး။ အခက်အခဲရှိပါ တယ်။ ကောလိပ် တို့ ဘာတို့သွားဖို့လည်း အခက်အခဲရှိပါတယ်။ ပြီးတော့လယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုတို့ အတွက်လ ည်းပြဿ နာဖြစ်နေ ပါ တယ်။ အဓိကအကြောင်းကတော့ တိုင်းရင်းသားကြောင့် -
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ သဘောက နိုင်ငံသားနဲ့ တိုင်းရင်းသား ရပိုင်ခွင့်တွေ ဆုံးရှုံးနေတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ပညာသင်ကြားပိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ အဓိကအကြောင်းပေ့ါ။ အဲဒီတော့ ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ဗွီအိုအေအနေနဲ့ကတော့ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဖြစ်မှုမဖြစ်မှုပြဿနာကို တော်တော်လေး အငြင်းပွားနေတဲ့ ပြောဆိုနေတဲ့ ပြဿနာလို့ နားလည်းပါတယ်။ နားလည်းတော့ ဒီကိစ္စဟာ ရိုဟင် ဂျာတွေ ဟာ နိုင်ငံသားဖြစ်မဖြစ်၊ တိုင်းရင်းသားဖြစ်မဖြစ် ဆိုတာတွေကိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ဘယ်ဖက်ကမှ လိုက်ပြီးဆွေးနွေးစရာမလိုဘူးပေါ့။ ဒါပေမဲ့ ကျနော်တို့ နားလည်သလောက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  အနောက် ဖက်ပိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော်ဒေသမှာ ရိုဟင်ဂျာလို့ ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ခေါ်တဲ့ လူစုတွေရှိတယ်။ဥပမာအားဖြင့်ဒီဒေသမှာလူဦးရေ နှစ်သန်းလောက် ရှိနေကြတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလူ ဦးရေ နှစ်သန်းတို့ဟာ နိုင်ငံသားအဖြစ် သတ်မှတ်တာ မခံရဘူး။ နိုင်ငံမဲ့တွေ ဖြစ်နေကြတယ်။ အခွင့် အရေးတွေ မရဘူး၊ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှုတွေ ခံနေရတယ်ဆိုတဲ့ အစီရင်ခံစာတွေ ကျနော်တို့ ကြားနေ ရတယ်။ ဒီပြဿနာကိုတော့ တကယ်တမ်းကြရင် နောက်ပိုင်းမှာ ဒေသအတွင်းမှာ ရှိနေတဲ့ အနီးစပ် ဆုံး ရှိနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ၊ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေ၊ သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်း ပါတီတွေ နဲ့ ဆွေးနွေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို ဆွေးနွေးဖို့ အကြောင်းကိစ္စမှာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုက ဘယ်လို ဝင်ပြီးပါဝင် တိုက်တွန်းနိုင်မှုတွေ လုပ်နိုင်မယ်လို့ ယူဆလို့လဲ။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ သူတို့က အမေရိကန်အစိုးရက အခု ကျနော်တို့ အကြံပေးတာက စကားပြောဖို့။ အခု မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့  opposition အန်အယ်လ်ဒီနဲ့ ရိုဟင်ဂျာ leadership, ရိုဟင်ဂျာ MP တွေ ရှိ တယ်။ ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ နောက် ရခိုင်လူမျိုးတွေနဲ့ စကားပြောပြီး ပြဿနာ ကို အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းဖို့အတွက်ကျနော်တို့ကအကြံဥာဏ်ပေးပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်းတတ်နိုင်သလောက် မြန် မာ အစိုးရကို persuading လုပ်ပြီးတော့ negotiation လုပ်ပြီးတော့ ဒီပြဿနာကို အေးအေးဆေးဆေး peacefully ရှင်းဖို့အတွက် နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး ရှာနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ အစိုးရကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒါကို နည်းလမ်းရှာနေပါတယ်။ ပြီးတော့ တခြား အန်ဂျီအို တို့၊ တခြား organization တို့၊ regional organization, regional countries such as ASEAN သူတို့လည်း ပါဝင်အောင် အဖက်ဖက်ကနေ နားလည်းမှုရအောင်။ နားလည်မှုနဲ့ I want to emphasize the word နားလည်းမှု - နားလည်းမှုနဲ့ ပြဿနာမလုပ်ဘဲနဲ့ နားလည်းမှုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေး ရှင်းကြဖို့အတွက် အကြံဥာဏ်ပေးပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း ကြိုး စားနေပါတယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ အဲဒီတော့ အခုလက်ရှိ အခြေအနေကတော့ ကျနော်တို့ နားလည် သလောက် က မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကနေ ပြဌာန်းထားတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေစာရင်းမှာ လက်ရှိနောက် ဆုံး ပြဌာန်း ချက် အရဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာဟာ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မခံရဘူး။ အလားတူပဲ အနီးစပ်ဆုံး ရှိနေတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း လူမျိုး၊ ဓလေ့ထုံစံ၊ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာတရားအရ အမျိုးမျိုးကွဲခြားချက်တွေ အကြောင်းပြပြီးတော့ ဒီဟာ သူတို့ရဲ့  ပြည်နယ်အတွင်းမှာ ဒါဟာ ပြည်နယ်ထဲမှာ အစပျိုးနေထိုင်တဲ့ တိုင်းရင်း သားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ အဆင့်မျိုးနဲ့ ခါးခါးသီးသီး ငြင်းပယ်မှုတွေ ရှိနေတယ်။ ဒီပြဿ နာတွေ ကို ဖြေရှင်း ဖို့ ဆို တဲ့နေရာမှာ ဘယ်လိုဖြေရှင်းမှ ရနိုင်မလဲဆိုတာကို Dr. Wakar အနေနဲ့ ဘယ်လိုယူဆသလဲ။
Dr. Wakar Uddin ။ ။ ဒီ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းဖို့အတွက် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးက နည်းနည်းသီးသန့်ဖြစ်ပေမယ့်၊ မတူပေမယ့်၊ culturally religious-wide, traditionally မြန်မာအစိုးရနဲ့ မြန်မာ society က ရိုဟင်ဂျာကို လက်ခံရပါမယ်။ Open minded နဲ့ အမြင်ကျယ်ကျယ်နဲ့ လက်ခံရမယ်။ ဒါလည်း လူမျိုးပါပဲ။ ကျနော်တို့လည်း လူသားလူမျိုးပါပဲ။ ကျနော်တို့နဲ့ မတူပေမယ့် သူတို့လည်း လူသားဆိုပြီး လက်ခံရပါမယ်။ သူတို့လက်ခံရင် ကျနော်တို့ဖက်က ကျနော်တို့လည်း သူတို့နဲ့ပေါင်းဖို့အတွက် assimilation အတွက် ကြိုးစားပါမယ်။ အဓိကတော့ ပညာရေး။ ကျနော်တို့ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးက ပညာသိပ်မရှိဘူး။ မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်မြို့ မှာ ပဲ နည်းနည်းပညာရှိပါတယ်။ အပြင်သွားရင် နယ်တွေရွာတွေသွားရင် ပညာမရှိဘူး။ လူတွေမှာ ပညာမရှိရင် လူတွေကအမြင်မကြည်ဘူး၊လူတွေကမပေါင်းချင်ဘူး။အဲဒီတော့ ပညာရေးကို တိုး တက်အောင် မောင်းတော၊ ဘူးသီးတောင်မှာလူတွေအမြင်ကျယ်လာအောင်ပညာတတ်လာအောင်၊မြန်မာစကားတွေပိုတတ်လာအောင်၊ မြန်မာစာတွေ တတ်လာအောင် မြန်မာအစိုးရက ကြိုးစားရပါမယ်။ အဲဒီတော့ နှစ်ဖက်စလုံးက ကျနော်တို့ ဖက်ကလည်း လုပ်ရမယ်။ သူတို့ဖက်ကလည်း နားလည်းမှုရှိရမယ်။
ဦးသန်းလွင်ထွန်း ။ ။ တဘက်နဲ့တဘက် အပြန်အလှန် နားလည်းမှုရှိလာအောင် လုပ်လာရမှာပေါ့။ အဲဒီနေရာမှာ တကယ်တမ်း ကွာခြားချက်က ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံစံနဲ့ ကိုးကွယ်တဲ့ဘာသာ တရား ဖြစ်နေ တယ် မဟုတ်ဘူးလား။ အဲဒီတော့ ဒီလောက်ကွာခြားတဲ့ အစုအဖွဲ့နှစ်စု ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း ရပ်တည်ပြီးတော့ အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်ဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။
ိရိုဟင်ဂျာသည်..တိုင်းရင်းသားလူမျိုးမဟုတ်ပါ..။ ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာသည်..မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးနှင့် ဆိုင်နေပါသည်...။ ရိုဟင်ဂျာကိုလက်ခံလို့မရပါ..။ လက်ခံလိုက်ပါက...တစ်မိသားစုကို လူအယောက်(၂၀) လောက်မွေးပြီးလူဦးရေ..တိုးပွား အောင်လုပ်မှာပါ..ပြီးတော့..ပါကစ္စတန်လိုပြည်နယ်ခွဲ ထွက်မှာပါ...။မြန်မာနိုင်ငံသည် မြေမြိုလို့မကုန်..လူမြိုလိုကုန်သွားနိုင်ပါတယ်..။ ရိုဟင်ဂျာသည် တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ပါ...။ ပြည်သူတစ်ယောက်အနေဲ့ ဆန္ဒကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားတာပါ...။ ပြစ်ပယ်လို့တော့မရဘူး..။ လက်ခံမယ်လို့ပြောတဲ့နိုင်ငံ တာဝန်ယူဖြေရှင်းတဲ့နိုင်ငံက အဲဒီရိုဟင်ဂျာ (၂)သန်းလောက်ကို ခေါ်ထားပေးကြပါ...။ VOA ကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်..။